Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 4,636 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
7 Shawwal 1439 H
Jaad ama Qaad sidoo kale loo yaqaano Miira waa geed balwad ahaan loo isticmaalo waa geed caleentiisu ay cagaarantahay xogaa guduud ku jiro, dhererkiisa waxa uu gaaraa 2 ilaa 5 Mitir, waxaana lagacunaa dalal dhawra oo ay kamid yihiin Soomaaliya, Djibouti, Yaman, Itoobiya, Kiinya iyo wadano kale oo badan.
Geedkaan asal ahaan badidiisa waxa uu kabaxaa dalalka Itoobiya, Yamaniyo Kenya, waxa uuna leeyahay noocyo badan waxana uu aad ugu faafay oo uu saamayn wayn ku yeeshay wadanka Soomaaliya so si aad ah looga cuno. Dadka qaadka cuna aad ayay u amaana laakiin dhakhaatiirtu waxay ku sheegaan in uu caafimaadka wax u dhimi karo. Marka la cuno qaadka waxa uu keenaa waxyaabo badan sida hurdo la'aan iyo cuntada oo qofku abateed u waayo. Dalal badan oo dunida ah qaadka cunistiisa iyo iibintiisa intaba lagama ogola. Dalalkani waxay u aqoonsan yihiin geedka qaadka ah in uu ka mid yahay maan-dooriyeyaasha. Sidaas ay tahay, waxa jira dalal reer galbeed ah oo qaadku xor ka yahay. waxa ka mid ah dalalkaas Ingriiska, Holland, Finland iyo kuwo kale. (SII AQRI)
Taariikhdu Maata Waa 22 Juun 2018 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Atomku waa wax yer oo ilmaqabata ah, waana qayb ka tirsan Maatarka waxaan ognahay in uu yahay maatarka wixii cufleh culaysnaleh meelmadhana buuxin kara. Qaabka Atom Helium oo ay ku jiraan 2 Borotoon Cascas (Guduud), 2 Niyutaroon oo Doog ah (Cagaar) iyo 2 Elektaroon oo huruud ah (Jaallo).
Atomka waa walxaha ugu yar kimikada waxa ay ka timid Atomos Gariiga oo macnaheedu yahay ma qaybsanto.
Atom kastaa waxa uu koobanyahay, Borotoono (+) Togane ah , Niyutaroono (0) iyo Elektaroon (-) Tabane ah, marka laga reebo maatarka loo yaqaan Hydrogen, taas oo aan lahayn Niyutaroono.
Borotoonku waxa uu ka culusyahay Elektaroonka 1827jeer. Elektaroonadu waxa ay maraan majiiro go'an oo ku wareegsan bu'da atommka. Atommka danabkiisu waa eber(0), waayo inta elektaroon iyo inta borotoon ee ku jirtaa way isleegyihiin
Unug waa waxa ugu yar ee shaqa qaban kara ee uu ka dhisan yahay nooluhu
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 4,636 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin